12V DC 110 / 240V AC LED neon flex light LED kona chiedza,Led Bhanhire Chiedza,Guzheng Town Led Home Decorative,Guangdong Led Home Decorative - China 12V DC 110 / 240V AC LED neon flex light LED kona chiedza, Manufacturer & Supplier
12V DC 110 / 240V AC LED neon flex light LED kona chiedza. Isu tine webs yakasarudzwa kushandiswa kwemafuti uye kubuda kwepamusoro LED Strip Lights kune zvose zviri mukati uye kunze kwekunamedza kushandiswa.Somumwe anonzi akatungamirirwa neon flex chiedza kana akatungamirira chiedza chakaoma, akatungamirirwa neon flex. Isu tinoshandisa zvakasiyana-siyana zveECE muzvitsva zvose zvinodikanwa zvekelvin pamwe nekuwanda kwezvinhu zvinonzi lumen zvingasarudzwa kubva. Shandisa mbiru yedu yakakwirira ye LED mavara emunzvimbo nekunze kwenzvimbo dzekudzivirira umo kunogara kwenguva refu, eco-friendly uye customizable illuminating linear inoda. Zvose zvedu zvisingabatsiri Ribhoni Star tape light rolls zvakaongororwa ruoko, zvakarongwa makumi mashanu nemazana emaawa ehupenyu uye dzine waranti yegore rechipiri. Tsvaga sarudzo yedu yekutanga RGB, uye Single Color zvimedu pasi apa kana kutipa foni nemibvunzo chero ipi zvayo yaunofanira kutsvaga kuti chiedza chei LED chiri nani kwauri.Ichiwedzera kujekesa kunobatsira uye SMDs yakakwirira-mvumo yakabvumira kuti LED dzitsvuku dzive inoshandiswa mumashandiro akadai sokupenya kwakakwirira basa, chiedza chemoto uye halogen magetsi kugadziriswa, kushandiswa kwemajekiti asinganzwisisiki, Ultra Violet kuongorora panguva yekugadzira michina, kugadziriswa uye kugadzirwa kwemagetsi, uye kunyange kukura michero.( 12V DC 110 / 240V AC LED neon flex light LED kona chiedza )
12V DC 110 / 240V AC LED neon flex light LED kona chiedza
©2005-2018 Karnar Taura nesu Site map Last modified: June 25 2019 04:22:45.